About productGano Fresh ကို လတ်ဆက်သော ပရုပ်မွှေးပင်များနှင့် လင်ဇီး၏အနှစ်သာရများနှင့်တကွ သဘာဝပစ္စည်းများဖြင့် နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသော အရည်အနှစ်ပုံစံဖြင့် အထူးဖော်စပ်ထားပါသည်။ Gano Fresh ကို သုံးခြင်းဖြင..
G'beauty Body Lotion
About productG'beauty Body Lotion လေးဟာ လိမ်းလိုက်ရင် အသားထဲစိမ့်ဝင်မှု အရမ်းကောင်းပြီး အသားရေကိုအေးမြပြီး စိုပြေလင်းလက်စေပါတယ်၊ အသားဖြူစေပါတယ်၊အရေပြားပေါ်ရှိ အမာရွတ်များကိုလည်း သက်သာစေပါတယ်၊ စေးကပ်တာ..
About productRed Rooibos Tea ကို တောင်အာဖရိက မှ ထွက်ရှိသော လက်ဖက်ခြောက် အနီ နှင့် လင်ဇီး တို့ပေါင်းစပ်ထုပ်လုပ်ထားသော ကြောင့်..Anti - Oxidant ဖြစ်ပါတယ် .သွေးလည်ပတ်မူ့နှင့် ကိုယ်ခံစွမ်..
About productIt isaunique schokolade that combines the flavors of Cocoa and flavors of Lingzhi.It gives that for the body to be healthy and boost immunity...
About productဒီဇိုင်းအသစ် ပေါင်းစပ်မှုအသစ်လေးနှင့် Gano Shampoo2in 1 လေးလာပါပြီ။ဆံပင်နှစ်ခွဖြစ်ခြင်း၊ ဗောက်ထခြင်း၊ ဆံသားပျက်စီးခြင်း၊ ဆံသားကြမ်းပြီးစိတ်ညစ်နေသူများ၊ ခေါင်းလျှော်ပြီးဆံသားလေးပါအိပျောင..
About productGano Soap. ကို Vitamin - E ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်သော ဆိတ်နို့ နှင့် လင်ဇီး ၏ အနှစ်သာရ တို့ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် အညစ်အကြေး ကင်းစင်၍ အိုမင်းရင့်ရော် ခြင်းကို ကာကွယ် ပေးပြီး အရည..
About productSpirulina Oats ကို Spirulina, လင်ဇီး, Oats. နှင့် Non- Dairy Creamer , Sugar. တို့ဖြင့် အထူးပေါင်းစပ် ထားသောကြောင့် ပရိုတင်း . ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ် .ဗီတာမင် နှင့..
About productGano Transparent Soap ကို သဘော်သီး . ရှားဇောင်း နှင့် လင်ဇီး. တို့ တမူထူးခြားစွာ ပေါင်းစပ်ထားမူ့ကြောင့် ဝက်ခြံ တင်းတိပ် မှဲ့ခြောက်.နေလောင် .အသားမညီ ခြင်းများကို&nb..